မေလ ၂၄ ရက်အတွက်ကြယ်ငါးကြည့်ခြင်းကဘာလဲ။ - Oscရာဝတီ
မေလ ၂၄ ရက်အတွက်ကြယ်ငါးကြည့်ခြင်းကဘာလဲ။
မေးခွန်းများနှင့်အကောင်းဆုံးအဖြေများ - မေ ၂၄ မွေးနေ့ Horoscope
ပစိဖိတ်အချိန်လသည် Sagittarius သို့ ၀ င်ရောက်သည်။ Scorpio တွင် ပို၍ လေးလံသောလေးနက်သော Sagittarius ပါ ၀ င်သည်။ လသည်အများပြည်သူ၏အသံကို Sagittarius သို့ ၀ င်သောအခါ Sagittarius သည်အလွန်ရင်းနှီးသော၊ ဖော်ရွေမှုနှင့်စွန့်စားမှုဖြစ်သည်။ စတီးရွိုက်ဂြိုဟ်ပေါ်ရှိလသည်ယခုအခါအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။ အားလုံးသည်မည်သို့မည်ပုံကျန်ရှိနေမည်ကိုဖုံးကွယ်ထားသောအရာများကိုဖော်ထုတ်ရန်အချိန်တန်ပြီ၊ ယခုအခါယေဘုယျအားဖြင့်လပြည့်သည်နှင့်ဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ထုတ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ Sagittarius Sagittarius သည်လွတ်လပ်မှုကိုလိုလားသည်၊ ခရီးသွားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ဤလောကသို့ထွက်သွားလိုသည်၊ သို့သော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်လျှင်၎င်းသည်ကြာသပတေးနေ့တွင်ပိုမိုပျော့ပျောင်းစေလိုသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ဗီးနပ်စ်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အလိုဆန္ဒ၏ကမ္ဘာဂြိုလ်ဖြစ်လာသည်။ ယခုအခါ Neptune Venus Neptune သည်သင်၏ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာကြောင့်သေချာမသိကြောင်းတစ်နေ့တည်းသာဆိုလိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ Neptune သည်လည်းနက်နဲသောလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်သင်၏လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ထားရှိရန်ဘဝကိုချစ်မြတ်နိုးပါ။
သောကြာနေ့တွင်ဝှက်ထားသောအရာများကိုထုတ်ဖော်ရန်မသွားမီတစ်ရက်တွင်လကြတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုသင်ခံစားမိနိုင်သည်။ လသည် Capricorn Practical Capricorn တွင်ရှိပြီးအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်သော်လည်း Capricorn မှာအနည်းငယ်မျှသာရှိနိုင်သည်။ အကြိမ်များစွာလည်းနှေးသော်လည်း၊ လသည်နေ့ခင်းဘက်၌ဆန်းသစ်သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောယူရေးနပ်စ်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဤသည်မှာသင်အမှန်တကယ်လမ်းပေါ်မှထွက်ပြီးအထူးသဖြင့်အလုပ်ခွင်၌အသစ်သောအရာများကိုကြိုးစားခြင်းသည်ကောင်းကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သောကြာနေ့မတိုင်မီတစ်နေ့သောကြာနေ့မတိုင်မီတစ်ရက်မှာမာကျူရီသည်ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆိုသောအရာဖြစ်သည်။ ? ? ?? ?? မြင်တွေ့ရသည့်အခါသင်အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သိသည်၊ မာကျူရီသည်နှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးနှေးရှိသေးသလဲ၊ optical ထင်ယောင်ထင်မှားနောက်ပြန်ရွေ့လျားပုံရသည်။
မာကျူရီသည်သတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည်။ သောကြာနေ့တွင်စာရေးကိရိယာ၌စတင်ပါကကျွန်ုပ်တို့ကြားရသောအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ပြသောမာကျူရီသည်အမှန်တကယ်ပိုမိုပြင်းထန်သော်လည်းမာကျူရီသည်အမွှာများ၌ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ပြဒါးအတွက်အဆင်ပြေဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သောကြာနေ့တွင်မာကျူရီသည်စာရေးကိရိယာဖြစ်လာသောအခါ၎င်းသည် h ၏ကမ္ဘာဂြိုဟ် venus ကိုအတိအကျရည်ရွယ်သည်။ သန္ဓေသားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ချစ်ကြည်ရေးအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်နွယ်မှုများနှင့်အတူ venus နှင့်အတူစိန်ခေါ်မှုရှုထောင့်၌ဤလကြတ်သောကြာသပတေးနေ့နှင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ဆက်သွယ်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ လမ်းကြောင်းပေါ်သို့သွားပါ။ နားလည်မှုလွဲခြင်းများရှိနိုင်သည်။ သို့သော်သောကြာနေ့တွင်မာကျူရီသည် venus သို့ရောက်သောအခါသင်ခံစားရသည်။ သင်၏ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အမှန်တကယ်ပြောဆိုရန်ပြproblemsနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းရန်အရေးတကြီးဖြေရှင်းသည်။ ယခုပြန်လည်ဆုတ်ခွာခြင်း၌မာကျူရီသည်အမှားအယွင်းများကိုမကြာခဏကြုံတွေ့စေတတ်သည်။ နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းသင်ခရီးသွားသောအခါပြောင်းလဲမှုများစွာဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်၊ သင်စစ်ဆေးနိုင်သည့်ပြmanyနာများစွာ၊ စာတိုက်ပျောက်ပြီး၊ ၎င်းသည်ပြဒါးနှင့်ကျဆင်းမှုအဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးအပိုင်းကတော့သင်အစီအစဉ်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဒီသီတင်းပတ်မှာဆက်ဆံရေးတွေအများကြီးရှိနေတာကြောင့်သောကြာနေ့က Mercury Venus ဟာအခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်၏ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သင်အမှန်တကယ်အလေးအနက်ပြောဆိုလိုပါက Mercury သည်တနင်္ဂနွေနေ့၌နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းများကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီနိုင်သည်။ သူကကျွန်ုပ်တို့အားမည်သည့်အုပ်စုလိုက်တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုမျိုးတွင်မဆိုပါဝင်စေလိုသော်လည်း၊ လနှင့် Aquarius သည် Gemini ရှိနေနှင့်လိုက်ဖက်ညီလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဤမသက်မသာသောစွမ်းအားများပြီးနောက်လ - နေကြားဆက်ဆံရေးတွင်စာမျက်နှာတစ်ခုတည်း၌ပင်ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်ကြိုးစားခြင်း နင်္ဂနွေနေ့သည်ပိုမိုသဟဇာတဖြစ်စေနိုင်ပြီး၊ အင်္ဂါဂြိုဟ်များသည်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်များအတွက်ကုသိုလ်ဖြစ်ရန်အတွက်ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်ကောင်းမွန်သည်။ အင်္ဂါဂြိုဟ်သည်အားကစားသမားလည်းဖြစ်ပြီး၊ ကခုန်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျွမ်းဘားကစားခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် Neptune ဟာပင်လယ်ရဲ့သခင်ဖြစ်လို့ရေကူးခြင်းအတွက်တကယ်စျေးပေါနိုင်ပါတယ်။
ငါထွက်မထွက်ခင်ဒီအကြောင်းသတိပေးပါရစေ။ မီတာသေးငယ်တဲ့အခကြေးငွေများအတွက်မေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေနိုင်ပါတယ်။ မှာရန်အတွက် astrologyanswers.com ပင်မစာမျက်နှာသို့သွားပါ။
ထိပ်ဆုံးမှာအကြံပေးများကဒီ tab ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော့်နာမည်ကိုရှာပြီးအခုပေါ်လာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးပါ။ လာမယ့်အချိန်လုံခြုံနှင့်အသံသည်အထိငါ့နောက်လာမည့်အပိုင်းနှင့်အတူလာမည့်အပတ်ကသင်တို့ကိုတွေ့မြင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်
မေလ ၂၄ ရက်သည် Taurus (သို့) Gemini လား။
မေလ ၂၄ ရက်ရာသီခွင်
အပေါ်မွေးဖွားတဲ့ Gemini ဖြစ်ခြင်းမေလ ၂၄ ရက်သင်သည်ပြင်ပကမ္ဘာကိုတွေ့ကြုံခံစားနေပြီးသင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုစိတ်ဝင်စားသည်။ မင်းရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုချက်ချင်းမျှဝေနိုင်ဖို့နဲ့အခြားသူတွေနဲ့အလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကြောင့်သင့်ကိုလိမ္မာပါးနပ်သူအဖြစ်ဖော်ပြတယ်။
အန္တရာယ်အရှိဆုံးရာသီဥတုလက္ခဏာတွေကဘယ်သူတွေလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နက္ခတ်ဗေဒင်နိမိတ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ horoscope သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးမှသည်စိတ်ဖိစီးမှုကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ခံစားမှုများကိုမည်သို့ဆက်ဆံသည်အထိ၊ အလွန်အမင်း၊ နက္ခတ်ဗေဒင်နှင့်နက္ခတ်ဗေဒင်နိမိတ်လက္ခဏာများအကြောင်းပြောဆိုသောအခါသင်တို့၌ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ အန္တရာယ်အရှိဆုံးရာသီဥတုလက္ခဏာတွေကဘာလဲဆိုတာတွေးမိ? ကောင်းပြီ၊ ငါတို့ဆောင်းပါးမစခင်မှာမှန်ကန်တဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါးအသစ်များအားလုံးကိုသင်လက်လွတ်မသွားစေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်သံလိုင်းသို့စာရင်းသွင်းထားရန်သေချာပါစေ၊ အန္တရာယ်အနိမ့်ဆုံးမှအမြင့်ဆုံး ၁၂ ရေနေသတ္တဝါဖြစ်သောအန္တရာယ်အများဆုံးနေရာမှနိမိတ်လက္ခဏာများကိုသတိထားပါ။ သင်က Aquarius တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်၊ သင်ဟာအနည်းငယ်သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီ Aquarius ဟာ Zodiac နိမိတ်လက္ခဏာအားလုံး၏အန္တရာယ်အနိမ့်ဆုံးနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကြားရပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ သင်သည် Aquarius ဖြစ်ပါကသင်သည်အလွန်လွတ်လပ်ပြီးလူများကိုကူညီရန်ပျော်စရာကောင်းသည်။ သူတို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုမှရှောင်ထွက်သွားသည်ကိုလူသိများပြီးလူများကိုကူညီခြင်းသည်လည်းအလွန်ဝေးကွာခြင်း၊ ရှက်ခြင်း၊ တွေးခေါ်သူများနှင့်လူသားများအနေနှင့်သူတို့သည်လေကြောင်းနိမိတ်ဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ကတတ်နိုင်သမျှမိမိတို့၏ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ရည်ကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ တကယ်တော့သူတို့ဟာနံပါတ် ၁၁ တွဲထဲမှာအန္တရာယ်အနည်းဆုံးနိမိတ်လက္ခဏာတွေပါ။
ဒီအားကောင်းတဲ့ဖန်တီးမှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်မကြာခဏခေါင်းကိုက်ခြင်းလက္ခဏာသည်စာရင်းတွင်အန္တရာယ်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ လီယိုသည်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းကြောင့်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသည်။ သူတို့သည်တန်ဖိုးကြီးသောအရာများကိုမီးသင်္ကေတအဖြစ်နှစ်သက်ကြသည်။ သူတို့ဟာလျစ်လျူရှုခံရဖို့ကိုမုန်းတီးပြီးဘုရင်မလို၊ ဘုရင်လိုဆက်ဆံတာမျိုးမလုပ်ကြဘူး။
ခြင်္သေ့များကိုတစ်ခါတစ်ရံပျင်းရိခြင်း၊ သူတို့အတွက်ပြုလုပ်ပေးပြီးပေးသောအရာများအဖြစ်ရှုမြင်ကြသောကြောင့်၎င်းတို့သည်အန္တရာယ်ရှိသူဟုမယူဆသင့်ပါ နဂိုအတိုင်းဆက်ရှိနေပါစေနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော serial killer အချို့သည်သူတို့၏ဇာတ်ကောင်များကောင်းသည်။ အဆုံးတိုင်အောင်စောင့်ကြည့်ရမည်။ သို့သော် Libra ၁၀ ခုကျော်သည်ချစ်စရာကောင်းပြီးချစ်စရာကောင်းသည်ဟုလူသိများသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းတို့သည်မပြတ်မသားဖြစ်နေတတ်သည်။ ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုစိတ်ကူးကြည့်ဖို့ခက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ချစ်ဖို့ကောင်းပြီးစိတ်ရင်းမှန်နဲ့လုပ်တာမျိုးကအချည်းနှီးဖြစ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံလှည့်စားတတ်ခြင်း၊ အရာဝတ္ထုတွေပြတ်တောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတိကဝတ်ပြုမှု၊ ngwomen တွေဟာသူတို့ရဲ့အခြားရာသီဥတုနိမိတ်လက္ခဏာများထက်ပိုလိမ်လည်တတ်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာရယ်စရာကောင်းပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့လူတွေထက်သေးငယ်တဲ့ရာဇ ၀ တ်မှုများကျူးလွန်ရန်ပိုများပါတယ်၊ မတ်တပ်ရပ်ပြီးပျင်းရိသူများကိုမုန်းတီးပြီးသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီရန်အလွန်ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါ။ ၎င်းတို့သည်အန္တရာယ်မကင်းသည့်အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြနိုင်လိမ့်မည်။ Pisces Pisces သည် Pisces သည်၎င်းတို့အားအနည်းငယ်ဖျက်ဆီးရန်နှင့်လက်တွေ့မကျကြောင်း၎င်းတို့သိကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းတို့သည်အန္တရာယ်ရှိသောဖြစ်လာနိုင်သည့်မလိုမုန်းတီးမှုနှင့်အဖျက်သဘောဆောင်သောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသောကြောင့် Pisces သည်နှစ်သိမ့်မှုပေးသော၊ ပျမ်းမျှရာဇ ၀ တ်သားများဟုသတ်မှတ်ခံရသည်။ Capricorn အားလုံးသည်အလယ်တည့်တည့်တွင်ရှိကြသည်။ လူများသည်သတိမဲ့အမှားများပြုလုပ်သည့်အခါသူတို့မုန်းသည့်စည်းမျဉ်းများကိုလေးစားကြသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်တဲ့အခါသူတို့ဟာအလွန်ထိရောက်ပြီးခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ဖြစ်ကြတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဆိုးမြင်ဝါဒအရအေးဆေးပြီးခွင့်မလွှတ်တတ်ကြဘူး၊ နံပါတ်ခြောက် Scorpio ရဲ့ဒေါသထွက်ရင်တော်တော်လေးစေးကပ်နေပြီးပရမ်းပတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ စာရင်းထဲမှာပါတဲ့နံပါတ်တစ်တစ်ခုကပိုနီးတယ်၊ ငါ့ကိုယုံကြည်တယ်၊ ငါလည်း Scorpi တွေကိုနတ်ဆိုးစွဲခြင်းနှင့်မနာလိုခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေရဲ့မကောင်းတဲ့အစုလို့လူသိများတယ်။ ရန်လိုတတ်ပြီးမကြာခဏအသုံးချနိုင်သောနိမိတ်လက္ခဏာသည်ကောင်းသောအရည်အသွေးများရှိသည်။ Scorpios များသည်စိတ်အားထက်သန်မှု၊ သစ္စာစောင့်သိမှုနှင့်ရဲရင့်မှုရှိသော်လည်းအလွန်ပြင်းထန်သော်လည်း Scorpios သည်စာရင်းတွင်အန္တရာယ်အရှိဆုံးနိမိတ်မဟုတ်သော်လည်းအံ့သြဖွယ်ရာ Scorpios ဖြစ်သည်။ အမှန်တရားနံပါတ် (၅) Aries Aries ခေါင်းမာတယ်၊ ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်တယ်၊ သူတို့ဟာအားရှိ၊ သူတို့ကိုမကြာခဏရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သူ၊ အနိုင်ကျင့်သူများအဖြစ်ရှုမြင်ကြပြီး၎င်းတို့သည်ပြtheနာ၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လိုသောကြောင့်အတ္တကသူတို့ကိုအန္တရာယ်ရှိသောနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်အလွန်ရဲရင့်သောကြောင့်သူတို့ကိုဒုက္ခရောက်စေနိုင်သည့်အတွက်ဂုဏ်ယူကြသည်။
Aries သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်နှုတ်အားဖြင့်လှုပ်ရှားမှုများအားဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုရရှိခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ၎င်းသည်စာရင်းတွင်ပိုမိုအန္တရာယ်ရှိသောလက္ခဏာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ နံပါတ်လေး Taurus Taurus သည်ဤရာသီဥတုနိမိတ်လက္ခဏာကို Taurus ၏သဘောထားတစ်ခုနှင့်အတူအုပ်ချုပ်သောအခါခေါင်းမာ။ ပုံကြီးချဲ့နိုင်သည်။ အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်နှင့်အားသွင်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်၊ အကယ်၍ ဒေါသထွက်လျှင်သူတို့သည်ပုံမှန်မဟုတ်၊ ဒေါသထွက်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် Taurus လူသိများသောစာရင်းတွင်အန္တရာယ်အရှိဆုံးဇာတ်ကောင်များဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြလိမ့်မည်၊ သူသည်အလွန်အန္တရာယ်ကင်းပြီးစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းအားဖြင့်လူတိုင်းသည်ရာသီခွင်တစ်ခုလုံးတွင်အန္တရာယ်အရှိဆုံးလက္ခဏာသုံးခုကိုစောင့်ဆိုင်းနေစေနိုင်သည်။ ဤဆိုင်းဘုတ်နံပါတ် ၃ ကိုမျှဝေခဲ့သည့်လူသတ်သမားများမှာ Sagittarius SAGs သည်အလွန်ရူးသွပ်သည်ဟုလူသိများကြပြီး၊ control freaks ဒီအရည်အသွေးတွေကမှားယွင်းတဲ့လူစားမျိုးကို Ted Bundy ဂျိုးဇက်စတာလင်နဲ့ပါပလိုတို့လိုနာမည်ဆိုးနဲ့သေစေနိုင်လောက်တဲ့ရာဇ ၀ တ်သားတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုကျူးလွန်စေနိုင်တယ် Escobar သည် Sagittarius ၏နိမိတ်လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Sagittarius သည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာမဆင်မခြင်ဖြစ်ပြီးအလွန်လိမ္မာပါးနပ်စွာစိတ်ဓာတ်တက်ကြွစွာပြုမူနိုင်သောကြောင့်သူတို့၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုသည်အလွန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပြီးနံပါတ် ၂ ဂျင်မ်နှင့်သတိပေးခြင်းခံရသည် အမွှာတစ်ယောက်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဒါပေမယ့်မင်းကအမွှာတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်၊ အမွှာတစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ခုခုသိရင်မင်းကတော်တော်လေးအန္တရာယ်များတယ်လို့ယူဆတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကလူမှုရေးနဲ့ပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာသိကောင်းသိပေလိမ့်မယ်။ အလွန်ပူပြင်း။ အေးစက်သောကြောင့်ဖတ်ရန်ခက်ခဲသောကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောအမွှာအချို့သည်နယူးယောက်ရှိ Shire မြစ်မှ Jeffrey Dahmer နှင့် DavidBerkowitz Son yikes တို့၏အမွှာတစ်ယောက်မျှအမွှာတစ်ယောက်မဟုတ်ကြောင်းသိလိုသောအလွန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည် အားလုံးရာသီဥတုအတွက်အများဆုံးစိတ်ခံစားမှုနိမိတ်လက္ခဏာကိုတ ဦး ဖြစ်လူသိများ။ သူတို့ဟာမနာလိုမှုနဲ့အသည်းအသန်ဖြစ်လေ့ရှိပြီးခန့်မှန်းရခက်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုပြင်းထန်မှုတွေရှိတယ်။ သူတို့ကိုရံဖန်ရံခါသိုမှီးထားနိုင်ပြီးအလွန်အထိခိုက်မခံနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်မဆိုင်းမတွပြုမူနိုင်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံအလွန်အန္တရာယ်ရှိသောအရာများကိုပင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကင်ဆာရောဂါသည်အသုံးချခြင်းနှင့် passive-aggressive ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်သူတို့ကိုယ်သူတို့မထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်လူသိများသည်၊ သူတို့သည်အခြားရာသီဥတုလက္ခဏာများထက်စိတ်ခံစားမှုများကိုပိုမိုခံစားရပြီးထိုစိတ်ခံစားမှုများကိုတုံ့ပြန်လေ့ရှိသည်။ ဤအချက်က၎င်းတို့အားအခြားမည်သည့်လက္ခဏာများထက်မဆို ပို၍ အန္တရာယ်များသောရာဇ ၀ တ်မှုများကျူးလွန်စေသည်။
ကင်ဆာဖြစ်လာသူထင်ရှားသောအမှတ်စဉ်လူသတ်သမားများတွင်မွေးကင်းစအမှတ်စဉ်လူသတ်သမား Jeanine Jones နှင့်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော Rillington placelaut ဝီကီမင်္ဂလာပါ JohnReginald တို့ပါဝင်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်သင်ဘာလက်မှတ်ထိုးသည်၊ မည်မျှတိကျမှန်ကန်ကြောင်းနှင့်သင်၏ပရောဖက်ပြုချက်များသည်သင်၏နေထိုင်မှုပုံစံနှင့်လိုက်နာရန်အချက်များမည်မျှတိကျသည်ကိုသင်အံ့အားသင့်သည်။ ဤကဲ့သို့သောဆောင်းပါးများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်သံလိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
မေ ၂၄ရာသီဥတုကလူအပေါ်ဖြစ်ကြသည်က-Geminiနယ်ခြား။ ဤသည်စွမ်းအင်၏နယ်နိမိတ်ဖြစ်၏။ Venus နှင့် Mercury ဂြိုလ်များသည်သင်၏ဘ ၀ တွင်အရေးပါသည်။ Venus ဂြိုလ်သည်သင်၏အတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်ကကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။
ကြည့်ရှုသူများမင်္ဂလာပါ၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌ငါတို့တတိယရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာကို Gemini ၏ထူးခြားမှုအကြောင်းပြောဆို။ Gemini သည်တတိယမြောက်ရာသီခွင်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နွေ ဦး ရာသီရောက်ခြင်းကိုသင်္ကေတပြပြီးလူ့ဆယ်ကျော်သက်များ၏နောက်ဆုံးနှစ်များအတွက်ဥပစာစကားအဖြစ်မကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
အဘယ်အရာက Gemini ဤမျှထူးခြားစေသနည်း ရှာကြစို့။ Gemini ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးလက္ခဏာများ အကယ်၍ သင်မာကျူရီမှအုပ်ချုပ်သောအမှတ်အသားဖြစ်လျှင်၊ သင်သည်ကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်သူဖြစ်လိမ့်မည်။ အမွှာသည်ဤနည်းဥပဒေမှခြွင်းချက်မရှိပါ။
၎င်းသည်လူ ၁၀၀၀၀၀ ရှေ့တွင်မိန့်ခွန်းပြောခြင်းဖြစ်စေ၊ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ခုဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်စေဖြစ်စေအမွှာများသည်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုကောင်းမွန်ပါသည်။ သင်မည်သူမဆိုနှင့်သဘောတူညီမှုရယူနိုင်ပြီးအခြေအနေတစ်ခုမှသင်၏လမ်းကိုပြောဆိုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုချောမွေ့သောစပီကာများဟုခေါ်ကြသည်။
ချောချောမွေ့မွေ့စကားပြောသော၏စကားပြော, လူတစ် ဦး စိတ်ထဲထံသို့လာ, Johnny Depp ။ Gemini သည်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းသည်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ပါသလား။ ငါတို့လည်းအဲဒီလိုမစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ သူ၏သရုပ်ဆောင်မှုကိုလူသိများသည်။ သူ၏အခန်းကဏ္ some အချို့အထင်ကရဖြစ်လာအတူ။
အထင်ရှားဆုံးစိတ်ကူးယဉ်သူများအနက်တစ်ခုမှာကာရစ်ဘီယံပိုင်နက်ပိုင်နက်မှ Captain Jack Sparrow ဖြစ်သည်။ Depp သည်အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုတောင်းဆိုသောအခါသူရဲကောင်းဆန်ဆန်ဖြတ်သန်းလာသည့်မိမိကိုယ်ကိုဗဟိုပြုသူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုဖန်တီးသည်။ ဇာတ်ကောင်နှင့်ဆက်နွှယ်သောဖျော်ဖြေရေးအချက်တစ်ချက်ရှိနေစဉ်နက်ရှိုင်းသောဝမ်းနည်းမှုလည်းရှိသည်။ ၎င်း၏ခန့်မှန်းရခက်သဘာဝကရှုပ်ထွေးသောစောင့်ရှောက်။
တစ်ချိန်တည်းတွင်သူသည်အားနည်းချက်ရှိနိုင်သည်။ Jack Sparrow သည်စာကောင်းကောင်းရေးသားခြင်းသာမက Johnny Depp ၏ပါရမီရှင်လည်းဖြစ်သည်။ Johnny သည်ညအချိန်တွင်သရဲတစ္ဆေတစ်ခုသို့မဟုတ်ပန်းချီဆွဲသူပန်းချီဆရာကဲ့သို့အလွန်ပါးနပ်။ ကျယ်လောင်သောအသံဖြစ်သည်။
မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိထိုကဲ့သို့သောဝိရောဓိရုပ်ပုံကိုကိုယ်စားပြုနိုင်ရန်ပရိသတ်ကိုမှန်ကန်စွာဖော်ပြနိုင်ရမည်။ ငါတို့အားလုံးအတွက်ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဂျော်နီ Depp သည်အမွှာတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Gemini သည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်သတိရှိခြင်းရှိရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ဤပိုင်ဆိုင်မှုကိုစာနယ်ဇင်းပညာ၊ တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်သုတေသနတို့တွင်အသုံးပြုသည်။ ဒီစရိုက်လက္ခဏာရဲ့အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုကတော့ 'မိန်းကလေးတစ် ဦး ၏ဒိုင်ယာရီ' ထဲမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်ဟာကမ္ဘာပေါ်ကမီးလောင်တိုက်သွင်းခံရသူတွေအကြောင်းပြောခဲ့တဲ့အန်းဖရန့်ရဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းအကြောင်းပြောနေတာပါ။
အမွှာများကိုလေ့လာနိုင်စွမ်းကိုသူတို့၏ဒိုင်ယာရီတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းသူသုံးစွဲခဲ့သောအချိန်တိုင်းနီးပါးကျန်ရှိသောကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမှတ်တမ်းကိုဒိုင်ယာရီတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ဤအမွှာငယ်ရွယ်များသည်အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်တွင်ကွယ်လွန်သွားသဖြင့်သူတို့၏ဘ ၀ ကိုအပြည့်အ ၀ မွေ့လျော်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိချေ။
ဟုတ်ပါတယ်, အမွှာ 40 သို့မဟုတ် 50 အကြားဖြစ်နိုင်ပြီးရှစ်နှစ်အရွယ်၏သိချင်စိတ်ရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့သည်အမြဲလေ့လာသင်ယူရန်နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်နှိုးဆွရန်လိုအပ်သောအရာများရှာဖွေနေသည်။ ဒီလိုအမွှာမျိုးတွေဟာမင်းသမီး Marilyn Monroe ပဲ။
အငြင်းပွားဖွယ်ရာများအားလုံးနှင့်သူမပုံစံအမျိုးမျိုး 'stupid blondes' ကိုကစားခြင်းအတွက်သူမဂုဏ်သတင်းနေသော်လည်း Marilyn Monroe သည်အလွန်မိုက်မဲသောဝေးလှသည်။ သူမသည်စာဖတ်သူဖတ်ကောင်းသူဖြစ်ပြီးစာအုပ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ပိုင်ဆိုင်သည်။ သူမရိုက်ကူးခဲ့ပါ၊ သူမဖတ်နိူင်သည်။ ဤစာအုပ်များတွင်သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိများ၊ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ထိုအချိန်ကကျော်ကြားသောဂီတသမားများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းများပါ ၀ င်သည်။
သူမသည်အခြားယဉ်ကျေးမှုများအကြောင်းလေ့လာရန်လည်းစိတ် ၀ င်စားသည်။ သူမအလွန်တကယ့်အဖြစ်အပျက်များဖြစ်သည့်သူမသည်သူမ၏အသွင်သဏ္blာန်ပြည့်သောဆံပင်ရွှေရောင်အခန်းကဏ္ and နှင့်အငြင်းပွားဖွယ်အများပြည်သူဆိုင်ရာပုံရိပ်ကိုသာမှတ်မိခြင်းမှာဝမ်းနည်းစရာဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Gemini သည်သဘောသဘာဝနှစ်မျိုးရှိပြီးအပြောင်းအလဲနှစ်မျိုးရှိနိုင်သည်။ လူအများစုက၎င်းတို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုမတွေ့ရှိနိုင်ပါ။
သငျသညျလညျးအခြို့သောမငြိမ်အနည်းငယ်ဖြစ်နှင့်အရေးကြီးသောဘဝဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်ရုန်းကန်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်သူတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်ရှုထောင့်တစ်ခုအပေါ်သင့်လျော်သောအကဲဖြတ်ခြင်းထက်အမြင်ရှုထောင့်အပေါ်တွင်သာမူတည်နိုင်သည်။ Gemini ရဲ့အရည်အသွေးအားလုံးနဲ့ဒီဟာကအမှားပဲ။
ယခုသင် Gemini ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုသိသော။ ဒီအကြောင်းပြောကြရအောင် ...
Gemini CompatibilityTwin သည်ယခုရာသီခွင်၌ပထမဆုံးလေကြောင်းနိမိတ်ဖြစ်သည်။ Gemini ရှိ A တစ်ခုအနေနှင့် Aquarius နှင့် Libra နှစ်ခုစလုံးသည်အတူတကွကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ကြသည်။ Aquarius သည်သိလိုစိတ်ပြင်းပြပြီးသင်ယူလိုစိတ်ပြင်းပြသူကိုတွေ့ရှိသည်။
Libra သည်အမွှာများ၏မတူညီသောသဘောသဘာဝကိုသူတို့၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုနှင့်ဟန်ချက်ညီစေသည်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူဟာသင်တန်းအတွက်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးရှိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂျင်မီဟာဇာတ်ကောင်နှစ် ဦး စလုံးအပေါ်သစ္စာစောင့်သိမှုကြောင့်လို့လူသိများတာမဟုတ်ပါဘူး။ Hmm၊ ဒါကြောင့်သူတို့က watermarks နဲ့ earth sign တွေပြproblemsနာတက်တာပေါ့။
Taurus, Virgo သို့မဟုတ် Capricorn ကဲ့သို့သောကမ္ဘာ၏နိမိတ်လက္ခဏာများသည်ဤလူများကိုလည်းလည်းတွေ့မြင်စေသည်။ Gemini ကသူတို့ကိုလည်းအစဉ်အလာများနှင့်အခြေစိုက်စခန်းရှာတွေ့လိမ့်မည်။ အလားတူပင် Gemini Scorpios ပြင်းထန်လွန်းခြင်းနှင့် Scorpios အလားအလာမယုံကြည်ရသောဖြစ်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အခြားအတွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးကင်ဆာနှင့် Pisces အတွက်အလုပ်များစွာလိုအပ်သည်။ နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာရှင်များက Gemini သည် Pisces နှင့်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးရှိသည်ဟုယုံကြည်သော်လည်း Leo charisma သည် Gemini ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ရန်သေချာသည်။ အလားတူပင် Gemini Aries နှင့် Sagittarius နှင့်အတူကောင်းစွာရ။
ဟုတ်ပါတယ်, Sagittarius အများကြီးပိုပြီးအလုပ်ယူလိမ့်မယ်။ အဘယ်ကြောင့်? ကောင်းပြီ၊ ၎င်းသည် 'like ဆွဲသောကဲ့သို့' ၏အမှုနှင့်ပိုဆိုင်သည်။ Aries နှင့် Gemini တို့သည်အလွန်ကလေးဆန်ကြသည်။
ကွာခြားချက်မှာ Gemini သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အသုံးချနိုင်ပြီး Aries သည်ခြယ်လှယ်ခြင်းကိုမုန်းတီးသည်။ ဒါကြောင့် Gemini ကဒီစိတ်ကစားနည်းများကိုသဲသဲမဲမဲလေ့လာနေသမျှကာလပတ်လုံးအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Gemini နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အရာတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့အလင်းဖြာပေးပြီးကတည်းက Gemini ကသူတို့ကြိုက်တဲ့အရာတွေအကြောင်းပြောပြီးမကြိုက်တဲ့စကားတွေပြောရမယ်။
ကစားစရာနှင့်ဥာဏ်ရည်စပ်စုစပ်စု,Geminiဝါသနာပါရာများ၊ ဝါသနာများ၊ အလုပ်အကိုင်များနှင့်သူငယ်ချင်းအုပ်စုများကိုအဆက်မပြတ်ရုန်းကန်နေရသည်။ သူတို့ဟာရာသီဥတုရဲ့လူမှုရေးလိပ်ပြာတွေပါ။ ဒီအမြန်လိုတဲ့အမွှာတွေဟာတစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုစကားပြောနိုင်တယ်။ ကြောက်စရာတွေးခေါ်ရှင်Geminiအသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုကြိုးစားရန်အမြဲဆင်းသည်။၂၈ 2021 ။
၁၂။ Aries and Aquarius - လူအများစုကဆန့်ကျင်သူတွေကဆွဲဆောင်တယ်၊ စစ်၏စိတ်အားထက်သန်မှု၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည် Aries ကိုအုပ်စိုးသည်။ Saturn သည်ယုတ္တိဗေဒနှင့်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း၏ဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။
သူတို့ရဲ့လိုက်ဖက်တဲ့နားလည်မှုကိုအမြဲတမ်းနားလည်ဖို့မလွယ်ကူပေမယ့်ဒီဆက်နွယ်မှုပေါင်းစပ်မှုဟာနည်းလမ်းများစွာနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဤဆက်ဆံရေးသည်စိတ်ရှည်ခြင်းနှင့်နားလည်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ Aries သည်ရဲရင့်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိပြီး Aquarius နှင့်အလွန်ထင်ရှားသော်ငြား၎င်းတို့ကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ထောက်ခံသည်မှာသဟဇာတဖြစ်ပြီးအထီးကျန်ဆန်သောဆက်ဆံရေးကိုရရှိစေသည်။ သူတို့သည်အရာရာအသစ်ကိုအတူတကွကြိုးစားခြင်းကိုနှစ်သက်ကြရုံသာမကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်ပေးရန်အရေးကြီးပုံကိုလည်းနားလည်ကြသည်။ ၁၁ ။
Taurus and Cancer - ဒီလက္ခဏာတွေကဝိညာဏနဲ့ဝိညာဏပေါင်းစပ်လို့ရသောခန်ဓာကိုယ်ရှိဓာတုဗေဒဆိုင်ရာချက်ချင်းနိမိတ်လက္ခဏာနှစ်ခုဖြစ်တယ်။ Cancer သည် Taurus အားအားနည်းချက်ရှိသည့်အခါအာဟာရဖြစ်စေသည့်ရေစာမှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Taurus နှင့် Cancer တို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သွားသောအခါ၎င်းတို့သည်အထိခိုက်မခံသော elings များဖြစ်ပြီးအခြားသူတို့၏ခံစားချက်နှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတွင်အစောပိုင်းကတည်းကခိုင်မာသည့်စိတ်ခံစားမှုနှောင်ကြိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
ကမ္ဘာမြေ၏အမှတ်အသားဖြစ်သော Taurus သည်ကင်ဆာ၏မိခင်ကိုပွင့်လင်းစွာကြိုဆိုသည်။ သူတို့ဟာအိမ်မှာတိတ်ဆိတ်တဲ့ညကိုမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ညကိုပိုနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်သူတို့အတူတကွကောင်းမွန်စွာနေထိုင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ဆက်ဆံရေးသည်သဘာဝဖြစ်ပြီးလွယ်ကူစွာစီးဆင်းသည်၊ သူတို့တူညီသောမိတ်ဖက်ပြုမှုရှိပြီးအတူတကွမိသားစုတစ်ခုနှင့်အနာဂတ်အတွက်အတူတူစံနမူနာများကိုအတူတူမျှဝေကြသည်။
Gemini နှင့် Aquarius - ထိုသင်္ကေတနှစ်ခုလုံးသည်ကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဉာဏ်ရည်ကိုပြသသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးကိုဖြစ်စေသည်၊ နှစ် ဦး စလုံးရာသီခွင်အမှတ်အသားဖန်တီးမှုချစ်သူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ရဲ့ခြေချောင်းအပေါ်ရင်ခုန်စရာသူတို့ကိုယ်သူတို့စောင့်ရှောက်ခြင်းမှပျော်မွေ့။ သင်နှစ် ဦး စလုံးသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ပုဂ္ဂလိကသီးခြားလွတ်လပ်ပြီးနှစ် ဦး စလုံးအတွက်အကျိုးရှိသည့်ဆက်ဆံရေးတွင်လွတ်လပ်မှုကိုခံစားနိုင်သည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသင်နှစ် ဦး စလုံးဟာသဉာဏ်ရှိသည်။ ပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုများမှတစ်ဆင့်သင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဆက်သွယ်သည်။ Aquarius နှင့် Gemini တို့သည်လေထု၏တူညီသောဒြပ်စင်အားဖြင့်အုပ်ချုပ်သောကြောင့်၊ ခ။ သူတို့သည်အတွေးအခေါ်များကိုစွန့်လွှတ်ရုံတင်မကတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး တုံ့ပြန်ချက်များကိုပါနှစ်သက်ကြသည်။ ၉ ။
Cancer and Pisces - ဒါကအကောင်းဆုံးဆေးပါ။ ဆိုင်းဘုတ်နှစ်ခုလုံးသည်ချစ်ခြင်း၊ ဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး နားလည်စေသည်။ ကင်ဆာသည်ဤဆက်နွယ်မှုတွင် ဦး ဆောင်ဖွယ်ရှိပြီး Pisces သည်ကင်ဆာရောဂါအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုပေးသော Pisces ကိုအမြဲတမ်းပြုစုပျိုးထောင်ပြီးရှာဖွေနေသည်။
ဒီချိန်ခွင်ဟာသဟဇာတဖြစ်ပြီးညီမျှသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဆိုင်းဘုတ်နှစ်ခုလုံးကပေးသည်။ နိမိတ်လက္ခဏာနှစ်ခုလုံးမှဝိညာဏဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ အဆိုပါဆက်ဆံရေးကိုသနားခြင်းကရုဏာစိတ်, တည်ငြိမ်မှုနှင့် sensitivity ကိုအပြည့်အဝဖြစ်လိမ့်မည်။
ဆိုင်းဘုတ်နှစ်ခုလုံးသည်ရေစာအမှတ်အသားများဖြစ်ပြီးရေဟာမြင်သာထင်သာရှိတာကြောင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ညှိနှိုင်းခြင်းမှာပြproblemနာမရှိပါဘူး။ ဇာတ်ကောင်နှစ် ဦး စလုံးသည်သူတို့၏ပန်းတိုင်များသို့ရောက်သောအခါအလွန်ကြိုးစားသည်။ သူတို့သည်ကွဲပြားသောလူနေမှုပုံစံနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုပန်းတိုင်များသို့ ဦး တည်အလုပ်လုပ်သည်ဆိုလျှင်တောင်မှသူတို့သည်ကောင်းမွန်စွာအတူတကွပျော်ရွှင်ရန်အန္တိမရည်မှန်းချက်ကိုမျှဝေကြသည်။ ၈ ။
Leo နှင့် Sagittarius - မီးဘေးလက္ခဏာများသည်မေလကတည်းကပြသခဲ့သည်။ နှစ် ဦး စလုံးချက်ချင်းဓာတုဗေဒအတွေ့အကြုံနှင့်သင်နှစ် ဦး စလုံးစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အမျိုးမျိုးကိုချစ်။ ဒီဆက်ဆံရေးအတွက်ငြီးငွေ့စရာဘယ်တော့မှ! Sagittarius ဒphilosophနနှင့်သြဇာရှိပါတယ်။ Leos ဟာ Sagittarius ဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုဂရုစိုက်ဖို့နဲ့အဲဒီမှာထောက်ပံ့ဖို့အတွက်အလွန်မာနကြီးပြီး ဦး ဆောင်မှုကိုပြသသည်။
မီးဆိုင်းများသည်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးရန်လိုကြသောကြောင့်သင်တို့နှစ် ဦး သည်သင်၏ပန်းတိုင်များနှင့်အိပ်မက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အချိန်ဖြုန်းတီးမည်မဟုတ်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်လျင်မြန်စွာလမ်းလျှောက်နိုင်သောဘဝပုံစံများဖြစ်သော်လည်းကောင်းမွန်သောထိန်းချုပ်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုသည်ဤဆက်နွယ်မှုနှင့်ဖန်တီးမှုကြိုးပမ်းမှုအပေါ်သူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တည်မြဲသောတည်ငြိမ်မှုရှိသည်။ သူတို့အတူတကွရှင်သန်နိုင်ရုံမကအတူတကွကြီးပွားမည်။ ၇ ။
Virgo နှင့် Taurus - ဤနှစ်ခုသည်အတူတကွစုစည်းသောအခါချမ်းသာခြင်းနှင့်လက်တွေ့ကျခြင်းတို့၏ပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးဟာစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ရိုးသားတယ်၊ အပျိုစင်သည်သတိထားရသည့်သဘောသဘာဝရှိပြီး Taurus ၏ခန့်မှန်းရခက်သည့်ခံစားချက်များကိုနားလည်သည်။
Virgo သည် Taurus ၏ခွန်အားကိုနှစ်သက်ပြီး Taurus Vi ။ rgos သည်းခံခြင်းတန်ဖိုးထားတယ်။ အပျိုစင်ကိုမာကျူရီကအုပ်ချုပ်ပြီး Taurus ကိုဗီးနပ်စ်ကအုပ်ချုပ်သည်။
ဂြိုလ်နှစ်ခုစလုံးသည်နေနှင့်နီးကပ်သောကြောင့်အတူတကွကောင်းမွန်စွာသွားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်နှစ် ဦး စလုံးသည်မြေကြီးဆိုင်ရာလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့၏ဆက်ဆံရေးသည်ခိုင်မာသောသီလနှင့်ချုပ်တည်းခြင်းဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်ဂရုစိုက်လျှင်ကြီးပွားနိုင်သည့်အလားအလာရှိသည်။ အလုပ်အနည်းငယ်၊ နားလည်မှုနှင့်ဆက်သွယ်မှုအနည်းငယ်ရှိခြင်းတို့ဖြင့်ထိုနှစ်ခုသည်လီယိုတွင်ရှည်လျားသောလမ်းကိုလျှောက်နိုင်သည်။ မောင်နှံစုံသည် Libra နှင့် Leo တို့သည်မျှတမှုရှိကြသည်။
Libra သည်လီယို၏ရဲရင့်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ကျက်သရေနှင့်ကစားခြင်းကိုပြသသည်။ မီးနှင့်ကမ္ဘာမြေလက္ခဏာများအရဤဒြပ်စင်နှစ်ခုသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုပိုမိုလောင်ကျွမ်းစေသည်။ Libra ကို Venus ဂြိုလ်ကအုပ်ချုပ်ပြီးလီယိုကိုနေကအုပ်ချုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဆက်ဆံရေး၏အုတ်မြစ်သည်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်နွေးထွေးမှုအပေါ်အခြေခံသည်။
Venus ကအမျိုးသမီးဖြစ်ပြီးနေကအထီးဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီစွမ်းအင်နှစ်ခုကြားမှာမျှတမှုရှိတယ်။ လက္ခဏာနှစ်မျိုးလုံးသည်အကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးကိုအတူတကွမျှဝေကြသည်။ လီယိုသည်သူတို့၏တက်ကြွသောသဘာဝနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုကို ဦး ဆောင်သည်။ သို့သော် Libra သည်အသံနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုသူကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်နောက်ပြန်လှည့်ရန်စိတ်မထားပါ။
သူတို့သည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ဂရုစိုက်ရုံတင်မကမိတ်ကပ်တစ်ခုစီသည်အခြားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောကြောင့်၎င်းတို့သည်အလွန်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ၅။ Scorpio နှင့် Cancer- နှစ်မျိုးလုံးသည်ရေစာများဖြစ်သောကြောင့်၊ ဤသည်မှာရင်းနှီးမှုနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများနှင့်ပြည့်နေသည့်တက်ကြွသောဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်။
သူတို့ရဲ့သဟဇာတဖြစ်မှုကခိုင်မာပြီးသူတို့နှစ် ဦး စလုံးအချင်းချင်းအပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ယုံကြည်မှုရှိကြသည်။ ကင်ဆာသည်လကိုအုပ်ချုပ်ပြီး Scorpio ကိုပလူတိုအုပ်ချုပ်သောဂြိုလ်ကအုပ်ချုပ်သည်။ ၎င်းသည်စိတ်ခံစားမှုကိုပြောင်းလဲစေသောစွမ်းအင်ကိုပေးရုံသာမက၊ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်သူတို့၏လိုအင်ဆန္ဒများနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ကြသည်။
သူတို့၏အကြီးမားဆုံးသောအားသာချက်များမှာသူတို့၏ဆက်သွယ်မှုတွင်ရှိပြီးသူတို့၏ခံစားချက်များကိုဘုံအကျိုးစီးပွားများနှင့်မျှဝေရန်လွယ်ကူသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ကြိုးစားအားထုတ်ရာတွင်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြပြီးစိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ တူညီသောပန်းတိုင်များဖြင့်၎င်းတို့သည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုအောင်မြင်နိုင်သည်။ ၄။ Sagittarius နှင့် Aries ဤသည်သည်ကောင်းကင်ပြိုင်ပွဲနီးပါးဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်မီးသင်္ကေတများဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဤပေါင်းစပ်မှုသည်ထာဝရမီးတောက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Sagittarius ကိုဂျူပီတာကအုပ်ချုပ်ပြီး Aries ကိုအင်္ဂါဂြိုဟ်ကအုပ်စိုးသည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်အထီးဂြိုလ်များဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကမ္ဘာကိုတွေ့မြင်သကဲ့သို့၎င်းနှင့်တူညီသည်။ နှစ် ဦး စလုံးဆိုင်းဘုတ်များပေးနှင့်ယူပျော်ရွှင်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည်သူတို့၏မောင်းနှင်အား၊ စွမ်းအင်နှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုတို့တွင်ကောင်းစွာညှိနှိုင်းထားသည်။
သူတို့နှစ် ဦး စလုံးစိတ်အေးအေးထားသည့်စိတ်သဘောထားနှင့်အသစ်သောအရာများကိုအတူတကွကြိုးစားရန်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်စွန့်စားခန်းများဖြစ်ပြီးဆက်ဆံရေးသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးလတ်ဆတ်သောလက္ခဏာကိုနှစ် ဦး စလုံးအပြင်ဘက်တွင်ထားလိုကြသည်။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေလိုပဲခိုင်မာပြီးအပြန်အလှန်အကြံဥာဏ်တွေရနိုင်ပါတယ်၊ အဲဒါကသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုခိုင်မြဲတဲ့နှောင်ကြိုးတစ်ခုဖန်တီးနိုင်လိမ့်မယ်။
သူတို့ကတ ဦး ကိုတ ဦး တန်းတူ၊ အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေများအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ ၃။ Capricorn နှင့် Virgo - လိုက်ဖက်ညီမှုရှိခြင်းအားဖြင့်ဤကမ္ဘာမြေ၏အမှတ်အသားများသည်ပြီးပြည့်စုံသောကိုက်ညီမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကွဲပြားမှုကိုလွယ်လွယ်ကူကူတွေ့မြင်နိုင်သည်။ Virgo နှင့် Capricorn နှစ် ဦး စလုံးသည်ရာသက်ပန်နှောင်ကြိုးကိုရှာကြပြီးအချင်းချင်းအပေါ်သူတို့၏သစ္စာရှိမှုသည်အနာဂတ်အတွက်ကောင်းမွန်သောလုံခြုံမှုကိုပေးသည်။ အပျိုစင်ကိုမာကျူရီကအုပ်ချုပ်သည်၊ သူတို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်နှင့်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုနားထောင်လိုစိတ်ရှိကြောင်းပြသသည်။
Capricorn ကို Saturn ကအုပ်ချုပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်ဉာဏ်ရည်သည်တည်ငြိမ်သောပြည်ထောင်စုအတွက်အကျိုးရှိစေသည်ဟုဆိုလိုသည်။ သူတို့သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရစိတ်ကျေနပ်မှုရရုံသာမကမိသားစုတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အတူတကွအိုမင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သူတို့၏စိတ်ဓာတ်သည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ၂ ။
Aquarius နှင့် Capricorn - အတူတကွအတူတကွကောင်းမွန်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပြသပြီးအပေးအယူလုပ်ရန်လွယ်ကူသောကြောင့်လေနှင့်မြေကြီးများရောနှောခြင်းအားဖြင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုအခြေခံပြီးလွယ်ကူစွာစီးဆင်းစေသည်။ သူတို့နှစ် ဦး လုံးသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်အေးဆေးတည်ငြိမ်မှုရှိပြီး၎င်းတို့သည်အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျသူများဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်လေးစားမှုနှင့်နားလည်မှုများရှိသောကြောင့်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏ခံစားချက်ကိုထုတ်ဖော်ရန်မကြောက်ပါ။
ငါးမွေးမြူသူများသည်တည်ငြိမ်မှုကိုတောင့်တကြသည်။ Capricorn များသည်များသောအားဖြင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုသတိရှိကြသည်။ ဆိုင်းဘုတ်နှစ်ခုစလုံးသည်သူတို့၏အစီအစဉ်များတွင်တူညီမှုရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်အခြားတစ်ခုသည်ပျော်ရွှင်မှုကိုသေချာစေရန်လိုသည်။ သူတို့သည်သူတို့၏ပင်ကိုစရိုက်နှင့်တိုက်မိသည့်တိုင်မိတ်ဖက်တစ် ဦး စီသည်အခြားတစ် ဦး ကိုစိတ်ပိုင်းနှင့်ကာယပိုင်းအရထောက်ကူပေးသည်။ ၁ ။
Pisces and Scorpio - ရေစာမှတ်နှစ်ခုအနေနှင့်နှစ် ဦး စလုံးသည်အခြားသူများ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အခြားတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အထိခိုက်မခံသောကြောင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သင်္ကေတနှစ်ခုစလုံးသည်ယုံကြည်မှုနှင့်လုံခြုံမှု၏အရေးကြီးမှုကိုနားလည်ပြီးနားလည်နိုင်သည်။
မင်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အများကြီးသင်ယူနိုင်တယ်။ သငျသညျနှစ်ခုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားကိုနားထောင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ သင်နှစ် ဦး စလုံးသည်တူညီသောပန်းတိုင်များနှင့်တန်ဖိုးများကိုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းကြောင့်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ယုံကြည်စိတ်ချမှုလျင်မြန်စွာရရှိပြီးသင်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး မှီခိုအားထားနိုင်ကြောင်းသင်သိလိမ့်မည်။
အတူသဟဇာတဆုံးအရိပ်လက္ခဏာGeminiယေဘုယျအားဖြင့် Aries, Leo, Libra နှင့် Aquarius ဖြစ်သည်။ နှင့်အတူအနည်းဆုံးသဟဇာတနိမိတ်လက္ခဏာများGeminiယေဘုယျအားဖြင့် Virgo နှင့် Pisces ဖြစ်သည်။
Geminiသူတို့ရဲ့ flakiness ကြောင့်ကျူးလွန်ရန်ရုန်းကန်ပေမယ့်Geminiအလွန်အမင်းဖြစ်ကြသည်သစ္စာသူတို့လက်ျာမိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာ။ အမြဲတမ်းရိုးသားစွာပြောဆိုရန်သတိရပါGemini; သင်ခံစားနေပုံကိုသူတို့ကိုပြောပြပါကသူတို့ပတ်ပတ်လည်တွင်ကပ်နေရန်ပိုများသည်။၁ ။ 2020 ။
သူတို့၏အားသာချက်များမှာ၎င်းတို့သည်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ အထွက်နှင့်အသိဉာဏ်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်သူတို့၏အားနည်းချက်များမှာ၎င်းတို့ဖြစ်သည်မငြိမ်မသက်, ထကြွလွယ်သော, စိတ်မချရနှင့် nosyနက်ရှိုင်းဆုံးအမှောင်ဆုံးသောလျှို့ဝှက်ချက်များကို Gemini အားပြောပြရန်သတိထားပါ။၁ ။ 2020 ။
များအတွက်သုံးအကောင်းဆုံးပွဲစဉ်Geminiဝိသေသလက္ခဏာများ Libra, Aries နှင့် Aquarius ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် Libra နှင့်Geminiပြီးပြည့်စုံသောပွဲစဉ်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးကို Air ၏အခြေခံအားဖြင့်လမ်းညွှန်ပေးပြီး၎င်းသည်သူတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုနှင့်နှုတ်ဖြင့်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုအတွက်အစကောင်းသင့်သည်။11 2021 ။
အတူသဟဇာတဆုံးအရိပ်လက္ခဏာGeminiယေဘုယျအားဖြင့် Aries, Leo, Libra နှင့် Aquarius ဖြစ်သည်။ နှင့်အတူအနည်းဆုံးသဟဇာတနိမိတ်လက္ခဏာများGeminiယေဘုယျအားဖြင့် Virgo နှင့် Pisces ဖြစ်သည်။ နေရောင်နိမိတ်လက္ခဏာများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းကယေဘူယျအားဖြင့်သဟဇာတဖြစ်စေသည်။
မေလ ၂၄ ရက်အတွက်မင်းရဲ့ရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာကဘာလဲ။
မေ ၂၄ Mithuna Rashi (ဝေဒမွန်းနိမိတ်) မေ ၂၄ တရုတ် Zodiac မြင်းမြင်းမေ ၂၄ မွေးနေ့ဂြိုလ်မင်းရဲ့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ဆိုတာဉာဏ်၊ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှု၊ ယုတ္တိဗေဒနဲ့အမြင်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
မေလ ၂၄ ရက်အတွက်ကံကောင်းတဲ့အရောင်တွေကဘာလဲ။
မေလ ၂၄ ရက်မွေးနေ့ပန်းရောင်အတွက် Lucky အရောင်များ - ဤအရောင်သည်ချစ်ခြင်း၊ ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်း၊ လိမ္မော်ရောင် - ပျော်ရွှင်မှု၊ သက်သောင့်သက်သာရှိခြင်း၊ အခမ်းအနားနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောစွမ်းအင်ကိုဖော်ပြသည့်လှုံ့ဆော်ပေးသောအရောင်ဖြစ်သည်။ မေလ ၂၄ ရက်မွေးနေ့အတွက်ကံကောင်းခြင်းနေ့ရက်များ
မေလ ၂၄ ရက် Gemini ရဲ့စရိုက်ကဘာလဲ။
မေလ ၂၄ ရက်နေ့မွေးနေ့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပြည့်စုံပြီးသစ္စာရှိသောသတ္တ ၀ ါများဖြစ်ကြောင်းအလေးအနက်ထားသည်။ ဒီလွတ်လပ်တဲ့ Gemini ကသူတို့စိတ်ထဲမှာအတွေးတစ်ခုရလာတဲ့အခါနောက်တစ်ဖက်ကိုတွေ့ဖို့သူတို့ကိုဆွဲဆောင်ဖို့ခဲယဉ်းနိုင်ပါတယ်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ သင်သည်ဟာသဉာဏ်ရှိသည့်ပါးနပ်မှုရှိနိုင်သည်။